Ihe ntụgharị ikuku, Igwe nju oyi, Fan Hood - Tecfree
Wuxi Tecfree International Dabere na Wuxi, mpaghara ọwụwa anyanwụ China, na ọ dị nso na Shanghai. anyi bu ndi nlere anya n’oru ike nke na elekwasite anya n’oru nye oku okpomoku na akwa nke anyi jiri eme ihe maka akụrụngwa erimeri na ngwa oru .we guzobere n’aho 2009, n’enye ndi oru anyi ahia n’uwa.
Anyị nwere nghọta dị mma n'echiche na ndị ahịa ya na ahụmịhe anyị na ihe ọmụma anyị.
E bugara ngwaahịa anyị na Europe, India, Australia, Israel, Korea wdg, merie ntụkwasị obi gburugburu ụwa, okwukwe a na-eme ka anyị na-aga n'ihu. anyị nwere obi ụtọ ịhụ ọtụtụ igwe na-arụ ọrụ na igwe igwe igwe nri anyị na igwe igwe ọkụ anyị ma ọ bụ igwe igwe ọkụ
Lelee ozo >>
Gosi Eke No.1 na ahia Japan
Ahịa ahịa No.1 na South Korea ahịa
Ego mbufa mmanu nke ikuku na ikuku…
“Nrụpụta dị elu na-eme ka ahụmịhe nkwụghachi” TECFREE na-ejigide ngwaahịa R&D karịa ka ọ dịkwuo elu iji mee ka mpaghara ikpo ọkụ dịkwuo elu ma mee ka nnyefe ọkụ dị ọkụ. NTRMPTRTA usoro usoro p…
Ihe Ihe Ntụgharị Catalytic
Ihe ntụgharị egwu nke catalytic bụ ngwaọrụ na-eji ihe na-eme ka agbanwe atọ dị iche iche na-emerụ ahụ n'ime mkpokọ ụgbọ ala ka ha banye na nchịkọta na-adịghị emerụ ahụ. Ihe nchịkọta atọ ndị a na-emerụ ahụ bụ: -Hydrocarbons VOCs (na ...
Anyị arụpụtala radiator na mmanụ ọnụ ...
Anyị arụpụtala radiator na mmanụ na-enye mmanụ maka igwe ọrụ ugbo maka onye nrụpụta na Gris izu ole na ole gara aga, dị ka ndị ahịa chọrọ ịrụ ọrụ ka mma na ọnọdụ ọrụ siri ike. Igwe ọkụ anyị nwere ike iguzo karịa ...
Otu onye nkuzi si enyere aka
Igwe ọkụ na-achọ ka ikuku ya na-agafe mgbe niile site na isi ya ka ọ jụọ ya nke ọma. Mgbe ụgbọ ala na-aga, nke a na-eme ọ bụla; mana mgbe ọ kwụ ọtọ, a na-eji onye ofufe akwado ikuku. Enwere ike ịchụpụ onye ofufe ...
Ndị na-agbanwe ọkụ na-ajụ ikuku
Ndị na-agbanwe ikuku na-ajụ oyi bụ ihe eji agbanweta ọkụ na-ejikarị ngwa ndị a na-eji agagharị agagharị ebe a na-enweghị mmiri mkpuchi, dịka ụgbọ ala na ụgbọ ala. Dị ka aha ahụ na-egosi, ọ nwere ntụ oyi…
Media na-elekọta mmadụ
Alala azụ ịkpọtụrụ anyị. Anyị dị njikere mgbe niile inyere gị aka.
Nduzi - Ngwaahịa egosipụtara - Ebe nrụọrụ